MUQDISHO, Soomaaliya - Dilalkaan oo siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada Muqdisho saacadihii ugu dambeeyay, ayaa waxaa kan horey laga soo wariyay Degmada Xamar-wayne ee gobolka Banaadir, barqinimada maanta oo Arbaco ah.
Wararka ayaa sheegaya in dilkaan uu ka dambeeyay Askari ka tirsan ciidanka dowladda, kaasoo wiil dhalinyaro ahaa, islamarkaana Mooto Bajaajle ahaa uu Rasaas ku furay kadib markii ay murmeen.
Darawalka oo goobta looga qaaday dhaawac ahaan ayaa geeriyoodey markii la geeyay Isbitaalka, sida ay Warsidaha Garowe Online u xaqiijiyeen saraakiisha caafimaad.
Illo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Garowe Online u xaqiijiyay sidoo kale, in laamaha amaanka dowlada ay qabteen Askarigii falkaan geystay, islamarkaana loo dhaadhiciyey Saldhiga Degmada.
Dhanka kale, Dabley hubeysan ayaa waxay ku toogteen Xaafadda Cali Shire ee degmada Howlwadaag Nabadoon caan ka ahaa halkaas, islamarkaana lagu magacaabi jiray Xuseen Jimcaale Geeddi.
Raggii Bastooladaha ku hubeysnaa ayaa goobta isaga baxsaday ka hor inta aysan soo gaarin goobta ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaasoo Baaritaano goobta ka bilaabay.
Maalmihii u dambeeyay amaanka Muqdisho ayaa umuuqday mid faraha ka siibaxayey iyadoona tani loo sababeynayo in laamaha amaanka ay ka muuqato Habac-saneen wayn, inkastoo isgoysyadda caasimada ay buux-dhaafiyeen.
Dilal ka dhacday Muqdsho iyo wararkii ugu dambeeyay
Soomaliya 14.06.2018. 11:58
Dilalka qorsheysan ee ka dhacay Caasimadda ayaa noqday kuwa sii kordhaya, xilli ay...
Soomaliya 02.09.2018. 10:40
Qarax Gaari oo ka dhacay Muqdisho iyo fahfaahin kasoo baxaysa
Soomaliya 06.05.2018. 16:35